64-နည်းနည်းက Windows | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
စက်တင်ဘာလ 29, 2014 မောင်းသူ 1
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-GM100 All of drivers are not support every […]
AzureWave ရှိသော်လည်း AW-NE773(H ကို) AR9280 AR5BHB92 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုပ်
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave ရှိသော်လည်း AW-NE773(H ကို) All of drivers are not support every […]
AzureWave ရှိသော်လည်း AW-NE771 AR9281 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုပ်
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-NE771 All of drivers are not support every […]
AzureWave ရှိသော်လည်း AW-NE770 AR5008 AR5BXB72 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN Card ကိုယာဉ်မောင်းပြတင်းပေါက်ဒေါင်းလုပ်
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-NE770 All of drivers are not support every […]
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု – AW-NE186H AW-NE195H AR9485 AR5B125 Recommended for end-customers. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-NE186H All of […]
စက်တင်ဘာလ 27, 2014 မောင်းသူ 1
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု – AW-NB097H AW-NB126H AW-NB100H AR9485 AR5B225 Recommended for end-customers. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-NB097H All […]
AzureWave ရှိသော်လည်း AW-NB041H RT3090BC4 WIFI ကြိုးမဲ့ WLAN ဘလူးတုသ် Card ကိုယာဉ်မောင်းကို Windows ဒေါင်းလုပ်
စက်တင်ဘာလ 26, 2014 မောင်းသူ 4
AzureWave စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု: အဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြု. မောင်းသူသာများနှင့်ယာဉ်မောင်း-နှင့်အတူ AzureWave ဆော့ဖ်ဝဲကို download options များပါဝင်သည်. device ကိုမော်ဒယ်: AzureWave AW-NB041H All of drivers are not support every […]
မိုဘိုင်းဖုန်း ဥပဒေရေးရာအနက် Technology_Internet နည်းပညာ device ကိုမော်ဒယ် Software များ 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE ပရိုဆက်ဆာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HTC က processor ​​ကို စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီပီယူ Intel က HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Nokia က Samsung က
device ကိုမော်ဒယ် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Technology_Internet Samsung က Intel က HTC က နည်းပညာ Samsung ရဲ့ Galaxy 64-နည်းနည်းက Windows ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Sony Ericsson က Software များ စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Intel က Server ကို Nokia က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် OS ကို-STORE processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း Qualcomm မှ စမတ်ဖုန်းများ HD Graphics ပရိုဆက်ဆာ